अनुहारमा कनिका जस्तो सेतो, पहेंलो रङको दाना किन आउँछ ? उपचार के हो? – Sandesh Press
June 24, 2021 417
अनुहारमा कनिका जस्तो देखिने सेतो, पहेंलो रङको कडा बल जस्तो दानालाई मिलिया भनिन्छ। मिलिया मुख्यगरी अनुहार, नाक, गाला तथा आँखाको तल्लो भागमा आउँछ। मिलिया सामान्यतयः साना आकारमा देखिने गर्छन्। तर, यसको आकार दुई मिलिमिटर सम्मको हुनसक्छ।
Prevअब ६० वर्ष पुगेका एकल महिला पुरुष दुबैले मासिक भत्ता पाउने
Nextसैनिक हेलिकप्टर दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु
भका भक मर्न थाले टर्की कुखुरा , देखिन थाल्यो यो रोग , साबधान रहनुहोला !